नेपाल आज | मैले भविष्य देखेरै हरेक कुरा बाेल्छु : प्रधानमन्त्री
मैले भविष्य देखेरै हरेक कुरा बाेल्छु : प्रधानमन्त्री
सोमबार, १० बैशाख २०७५ गते प्रकाशित - नेपाल आज(PO)
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अाफुले बाेलेका कुरा भविष्यमा निहित हुने दाबी गरेका छन् । एमाले केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा सोमबार आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री अाेलीले यस्ताे दाबी गरेका हुन् ।
'मैले अाजसम्म जे जे बाेले हरेक कुरामा भविष्य लुकेकाे छ, भविष्यकाे प्रगति देखेर गफ भन्ने अाफै अचम्मित हुनेछन् । ' उनले भने ।
उनले कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देेउवाप्रति लक्षित गर्दै भने, 'म भारतमा भ्रमणमा जाँदा लम्पसारवादी भएकाे भन्ने बुद्धिजीवी सद्भाव भड्काउने काम गरिरहेका छन्, याे कुरा सह्य हुने छैन । '
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले ‘नेपाल र नेपाली जनता एकापसमा मिलेर बसेकाले कोही–कसैको पनि गलत गतिविधि क्षम्य हुँदैन’ भने ।
सामाजिक सद्भाव कायम राख्दै सबै क्षेत्रलाई मिलाएर लैजाने पक्षमा आफू रहेको उनको भनाइ थियो । लोकतन्त्र जनताको व्यवस्था भएकाले यसैमा नै सबैको समृद्धिको सपना पूरा हुने प्रधानमन्त्रीको कथन थियो ।
वर्तमान सरकारले सुरु गरेको आर्थिक समृद्धि र सुशासनको योजनालाई केही मान्छेले नबुझेको टिप्पणी गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने–‘मैले रेल चलाउने, पानीजहाज चलाउने कुरा गरेको छु ।
समृद्धिको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छु । तर, केही बुद्धिजीवी जनताको कुरा खोइ भन्दै हिँडेका छन् । सरकार जनताका पक्षमा काम गर्छ । समृद्धिको सपना पूरा गरेरै छाड्छ । विकास र समृद्धिको विषयलाई लिएर अनावश्यक बुद्धिविलास नगर्न म आग्रह गर्छु ।’
उनले सही नीति, सिद्धान्त, कार्यक्षमता र विचारका आधारमा एमालेप्रति जनताको आकर्षण बढेको र आगामी दिनमा थप आकर्षण थपिने उल्लेख गरे ।
एमाले नीति र सिद्धान्तकोमात्रै टेको लगाएर नबस्ने बरु जनचाहना र देशको आवश्यकतालाई ख्याल गरेर अगाडि बढ्ने स्पस्ट पारे ।
पूर्वसांसद, राजदूत एमालेमा
कार्यक्रममा पूर्वराज्यमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टीकी नेत्री लीला भण्डारी एमालेमा प्रवेश गरेकी छन् ।
भण्डारीसँगै पूर्वराजदूत माया शर्मा, पूर्वसभासद सुकदैया चौधरीलगायत १७५ नेता–कार्यकर्ता एमालेमा प्रवेश गरेका छन् ।
भण्डारी वि.सं. २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट संविधानसभामा निर्वाचित भएकी थिइन् । उनी पछिल्लो समय डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीमा थिइन् ।
पूर्वमन्त्री भण्डारीले राजनीतिक परिवर्तनका लागि आफूले माओवादी जनयुद्धमा लागेर योगदान गरे पनि अब आर्थिक समृद्धिका लागि एमालेको नेतृत्व आवश्यक देखेको बताउँदै नयाँ शक्तिसमेत एक दिन एकता प्रक्रियामा आउने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
नवप्रवेशीलाई एमाले अध्यक्ष ओलीले टीका लगाएर पार्टी प्रवेश गराएका थिए । रासस
केपी शर्मा ओली शेर बहादुर देेउवा